Waxaad Ceebta U Taqaan Rag Bay Camalkooda Tahay. | Somaliland Today
← Wasiir Cali Mareexaan waxaan leeyahay Xiqdiga iyo Qabyaaldda Bulshada kala dhex bax
Ma Rabtaa Inaad Quraanka Iyo Culuumtiisa Ku Barataa Adiga iyo Ubadkaagu Online Idinkoo Gurigiina Jooga?? →
Dhaashane:Waar heedhe inaadeer xalay waxan ku riyoonayey anagoo reer kulmiye xaflad meel ka dhigayna ayuun baanu argnay dhirtii oo nagu soo yaacaysa.qof ba meel buu u cararay saa qofba geed baa daba cararay.Maxaad u malaynaysaa waxaa?Ma foodkaanu ku guulaysanaynaa tolow?
Dhaqane:Mayee waa masaakiintii aa waxooda cunteen oo dhir noqday.
Dhaashane:Hada nimankaasi waxay is leeyihiin doorashaa helaysaan.Ilaahow maa imika la yidhaahdo doorashadii dib baa loo dhigay ,anagu dagaal baanu ka xignaa ileyn
waanu is hubnaa laakiin idinku sidiinii baa ogolaan lahaydeen ,ileyn waa is ogtihiin inaydaan waxba helayne.
Dhaqane :Horta somaliland dadka habeenkii soo jeeda iyo dadka maalintii soo jeeda iyamaa badan?
Dhaashane:Dee mooye .Miyaanu isu tirinay anagu.Waayo se maxaad ku keentay?
Dhaqane:Hadii dadka maalintii soo jeeda badan yahay Waddani baa helaya.Hadii dadka habeenkii soo jeeda badan yahayna Kulmiyaa helaya.
Dhaashane:Waar waxaa iga daayoo ma daawatay marxuum Abdiraxman Talyane sidii quruxda badnayd ee dowladu aaska qaran ugu samaysay?
Dhaqane:Waxa la yidhi:Waxaad ceebta u taqaan rag bay camalkooda tahay.Ma ninkii aa ifka ku aasteen ayaa weliba xabaashiisiina ka dul qudbadayseen.IWuxuun baan maqli jiray ,indho adagaa ma Kulmiyaa.
Maan khaldanayn markaan idhi:
Tobanluhu biigii u yahay boqor sidiisiiye
Baashaha ma beegsdo hadii boolo uu yahay e
In kastuu is buunbuuniyuu booca kor u taago
Muuseba bartii uu Cirro maray beegsan kari waa.
Waa qalinkii:Baxnaan x aden diiriye